Munamato kuitira kuti arote nezvangu. ? Nhasi manheru ufunge nezvangu
Munamato kuti iye andirote. Zvinogona kutaridzika kunge chiito cheudyire asi chokwadi ndechekuti izvi zvinogona kuve yeminamato zvakanyanya kutendeka zvatinogona kuita muhupenyu hwedu.
Kupinda muzviroto zvemumwe munhu inogona kuve nyaya yakaoma kana ikasaitwa nenzira kwayo, ndosaka tichifanira kuziva zvese zvinotaurwa nemutsara uyu tisati tazviita kuitira kuti tigone kuita zvine musoro.
1 Chii ichi Munamato kuti iwe kurota nezvangu?
2 Munamato wekurota neni manheru ano
3 Munamato wekufunga nezvangu uye kurota ini
4 Namata kuna Chifu Rufu kuti urote neni
5 Munamato kuti ndisakwanisa kurara ndichifunga nezvangu
5.1 Ini ndinogona kutaura minamato yose here?
Ichi chii Munamato wekurota neni?
Chinangwa chechokwadi chakanyatsojeka, kuita kuti munhu iyeye arote pamusoro pako, kuti kunyangwe mune zviroto iwe unogona kukanganwa nezvako.
Se iwe unogona kunyorera mune izvo zviitiko zvehukama hwehukama Mukuita, mumwe wacho anogona kunge ari panjodzi kana kuve nyore kukanganwa nezvako.
Vanoti zviroto zvine simba uye ndosaka tichibvunza kunyanya kugara mukati mavo kwenguva yakareba kuti tisimbise manzwiro.
Munamato uyu unogona kuitwa nguva dzese uye munzvimbo dzese.
Izvo hazvina basa kana munhu iyeye aine nguva yakareba asina kutiona kana kutaura nesu, chinhu chakakosha chinhu ndechekuti anofunga uye anorota isu nguva dzese.
Munamato wekurota neni manheru ano
Kurota neni nhasi mudiwa,
Huye, mweya yedu inotarisirwa kugara pamwechete!
Kurota neni nhasi, mudiwa asingaperi, nekuti ndiri
Ini ndinosimbisa masimba ehupenyu kuti apinze
Mukufunga kwako kwamasikati wakafunga mufananidzo wangu, hunhu hwangu
Uye inzwi rangu kuti izvi zviite as
Kuvapo mamuri manheru ano.
Pamwechete isu ticha bhururuka kuburikidza nemadhaads asingazivikanwe;
Pamwe chete isu tichafamba nemakungwa ari kure;
Tichangonakirwa mumasango anonaya mvura;
Kufungidzira kwako ndiko kuchave kwemugumo asi kupi
Kuti iwe uzviite, zvichagara zviri iwe neni.
Dai aya mazwi akauya mupfungwa dzako uye izvo
Ivo vanoputika mukati mako kuti
Kuti ini handifi ndakapukunyuka kubva mumuviri wako
Kunyangwe kana iwe ukavhara maziso ako
Tora mukana wesimba rekunamatira kurota neni husiku huno.
Iyi imhando yakatarwa yemunamato nekuti tinokumbira kuti uoneke mukurota kwako kwehusiku uhwo isu matinonamata.
Izvi zvinongozviita zvese zvine simba uye zvinoshanda.
Kunyanya kuitika, mushure mehusiku ihwohwo takadzidza nezvekurota kwaaive ave nemumwe munhu sezvo ainyanya kuda kuyedza kubatana nesu nekuti zviroto zvinowanzove zvakanyanya.
Munamato wekufunga nezvangu uye kurota ini
Ndifonere izvozvi, izvozvi izvozvi ...
(Taura zita remunhu)
Panguva ino, chero kupi. Mune ino nguva iwe uchaisa iyo yako pfungwa uye pfungwa dzako dzadzoka pandiri ...
Iwe unonzwisisa kuti haugone kurarama kunze kwangu. Panguva ino iwe unozotanga kurasa kudada kwako. Panguva ino urikuda kundifonera. Izvozvi urikuda kufunga nezvangu ...
Uri kuzoedza kuramba here? Usaramba. Kana iwe ...
(Anotaura zita remunhu) Usandifonera izvozvi, iwe uchazondidaidza gare gare. Asi ikozvino unogona kuva nechokwadi chekuti iwe uchandidaidza.
Iwe unonzwisisa kuti unondida neni uye haugone kuve pasina kuvepo kwangu. Panguva ino unofunga nezvangu ...
(Taura zita rako) Ini ndinokumbira vatumwa vatatu, Miguel, Gabriel naRafael, kuti vavheneke mwoyo wako ...
(Taura zita remunhu wacho) uye bvisa chero mibvunzo. Izvo izvo Michael achadzinga kubva kwauri mweya weakaipa uye zvese zvinopesvedzera zvakaipa.
Gabriel anokuzivisa iwe ... (Inotaura zita remunhu) zita rangu, iro rinopfura izwi "Rudo" munzeve yako uye unondirangarira ...
(Taura zita rako) Rafael kuti ushandise mafuta ekuporesa kuporesa kusatenda uko kwakaitika mumoyo mako, uye kuchengeta vanga re "rudo" uye chishuwo kwandiri chakavhurika ...
(Taura zita rako).
Saka Iva Izvo!
Pinda mupfungwa dzemumwe munhu uye uchivakanganisa kuitira kuti kunyange kurara ramba uchingorota isu Zvinoita sekunge chikumbiro chakanyanyozvifunga kana chakakombama uye vamwe vanogona kufunga kuti isu tiri vapambi nekuda kwekupinda muhana yemunhu hana yavo pasina mvumo, asi chokwadi ndechekuti isu tiri kungokumbira chishamiso, tichishandisa zvombo zvemweya mukuda kwedu.
Tinofanira kuva nechokwadi, chechokwadi chekutenda icho uyu mutsara uchaita unodiwa mhedzisiro pasina kukonzera kusagadzikana kana kumwe kusakosha kusingafadzi uye kweichi hakuna chinhu chiri nani pane kuchengeta moyo uine hutano kubva kuzvishuvo zvakaipa uye zvisina kunaka masimba.
Namata kuna Chifu Rufu kuti urote neni
Nesimba raSanta Muerte uye nemweya mitatu inotariswa naSanta Muerte JOGF ichauya Zvino Namasimba aSanta Muerte uye nemweya mitatu iyo Santa Muerte anoona JOGF Ino ichauya mushure meYJDC yangu.
Achauya achikamba uye murudo uzere nerudo; zvekuda kudzoka ndokumbira ruregerero rwekureva nhema uye kundibvunza mukudanana uye gare gare mumuchato nekukurumidza sezvazvinogona.
Santa Muerte, ini YJDC ndichave ndine simba iro iro JOGF rinokanganwa uye rinosiya panguva imwechete chero mukadzi angave ari mumusoro wake uye anodzoka kuzonditora uye kuzivisa kune vese kuti vaone.
Santa Muerte chengetedza JOGF kure nemukadzi chero upi zvake, kuti ave mumusoro make anonditsvaga muYJDC yangu nguva dzese nhasi izvozvi uye achigara achida kuva padivi pangu, kuti ave nechokwadi chekuti ndiri mukadzi akakwana kwaari, uyo JOGF Ini handigone kurarama ndisina YJDC yangu uye kuti JOGF inogara iine mufananidzo wangu mupfungwa dzayo, munguva dzese dzehupenyu hwayo ...
Ikozvino pandiri ini wandiri, JOGF achanditsvaga nekuti kufunga kwake kuri muYJDC yangu ..
Uye paanoenda kunorara anorota nezvangu uye paanomuka kuti anofunga nezvangu uye anondida, kana achidya anofunga nezvangu, paanotsika pane izvo iye anondifunga, munguva dzese dzehupenyu hwake funga nezve YJDC yangu….
Munamato uyu kurufu dzvene kurota neni ndeimwe inozivikanwa kwazvo.
Zvine simba uye zvishamiso Huye, kusvika parizvino kune zvakawanda zvishamiso zvinopupurirwa kupoterera nyika yezvikumbiro zvinopindurwa pachinhu ichi.
Kubatsira kune simba kuti munhu akasarudzika arege kurota pamusoro pako.
Santa Muerte vanogona kuve shamwari yedu, iyo inogona kutibatsirawo mune mamwe mamiriro erudo umo isu tingave takarasa tariro.
Munamato kuti ndisakwanisa kurara ndichifunga nezvangu
Kana ndapedza kutaura mashoko aya.
Ah mudiwa, iwe uchave une simba uye unorota nezvangu!
Izvozvi, nekuda kwekuipa, mweya wako neyangu
Ivo havanyepi pamwechete parizvino, asi chete kupindira kunodiwa
Zvemauto ekupedzisira kuitira kuti izvi zvichinje kuve zvakanaka.
Iwe uchazondirota zvakadzama,
Uye ikoko isu tichadanana semumwe kwete!
Zvisungo zvedu zvinopera
Uye kana uchimuka iwe uchave uri murudo zvakanyanya
Ndiani akakumirira kwenguva yakareba kudaro.
Teerera kune mazwi aya, vadikani, ivo ndivo vanozodiridza
Rudo ruchatumbuka mune zvese kubva zvino zvichienda mberi.
Dai mauto anogara achindiperekedza avatore uye
Tora ugaro hwako uye, kana wavhara maziso ako,
Chizvipukuta pachiso chako uye projekiti yangu
Mukurota kwako kwekutanga manheru ano.
Rudzi urwu rwemunamato rwunoshanda, nekuti pfungwa dzinova masaisai segungwa, usamira kuuya nekuenda, zvese izvi nechinangwa chega kuti munhu uyu asakanganwe isu.
Nechikonzero chakati isu tinogona kuzviwana tiri kure uye takave neiyo danho rekukonzera chimwe chinhu mumunhu anodikanwa, kuti tirambe tiripo nguva dzese nekuti iko mune izvo mamiriro uko munamato uyu unonyatsova nzira yedu yekubuda.
Kudzidza kushandisa izvi zvombo zvemweya kunotora nguva, asi chinonyanya kukosha ndiko kuramba uine kutenda kwakasimba uye kusingazungunuke.
Mhinduro iri hongu inotemesa.
Wese minamato yakarongerwa kuti isu tikwanise mumwe nemumwe wavo uye tivaite vanoshanda mune yega yega mamiriro anogona kubuda muhupenyu.
Kunyangwe hazvo zvakaoma sei zvatinokumbira kuti zvionekwe
Wakada here munamato wekurota nezvangu?
Minamato 4 yekundifonera
Munamato weChechi Cyprian